Laparoscopic Gastric Banding (မှန်ပြောင်းမှတဆင့် အစာအိမ်ကွင်းစည်းခြင်း) - Hello Sayarwon
ရောဂါစစ်ဆေးခြင်း နှင့် အတည်ပြုခြင်း
မှန်ပြောင်းမှတဆင့် အစာအိမ်ကွင်းစည်းခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ
အစာအိမ်ကွင်းစည်းခြင်းဟာ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချဖို့ ရေရှည်အထောက်အကူ ပြုပါတယ်။ ဘယ်လောက်ထိ အောင်မြင်မယ်ဆိုတာ အစားစားတဲ့ပုံစံအသစ်နဲ့ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်း ဘယ်လောက်လုပ်ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ အပေါ် မူတည်ပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်မှာ အလျော့အတင်းလုပ်နိုင်တဲ့ ဆီလီကွန်ကွင်းကို အစာအိမ်အပေါ်ပိုင်းကို ထည့်သွင်းခြင်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် အစာနည်းနည်းစားရုံနဲ့ ဗိုက်ပြည့်လာစေပါတယ်။
ကိုယ်အလေးချိန်ကို ရေရှည်ထိန်းနိုင်ပေမယ့် ပုံစံအသစ်ကို ဘယ်လိုထိန်းထားနိုင်မလဲ ဆိုတာအပေါ် မူတည်ပါတယ်။
ရေရှည်ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျခြင်းဟာ အဝလွန်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ပြသနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
မှန်ပြောင်းမှတဆင့် အစာအိမ်ကွင်းစည်းခြင်းဘာကြောင့် ပြုလုပ်သလဲ
သင့်ရဲ့ BMI ဟာ ၄၀ကျော်နေရင် ဒီခွဲစိတ်မှုဟာ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ရေရှည်ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။ BMI ဟာ ၃၅ ကျော်ပြီး ဆီးချိုအမျိုးအစား (၂) နဲ့ သွေးတိုးလိုမျီုး ကျန်းမာရေးပြသနာတွေရှိနေရင် ဒီနည်းလမ်းကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ဆရာဝန်ဟာ သင်ရဲ့ BMI ကို အတည်ပြုပြီး ဒီနည်းလမ်း အသုံးပြုသင့်မသင့် အသေးစိတ်စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။
ခွဲစိတ်ဖို့ စိတ်ပူပန်မှုရှိရင် တခြားနည်းလမ်းတွေ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသေးတယ်။ အဲဒါတွေကတော့
အစားလျှော့ခြင်း၊ စားသောက်မှုပုံစံပြောင်းခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းပိုလုပ်ခြင်း စတဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့ နည်းလမ်းတွေ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ တခါတရံ ဆေးခန်းတွေက ဆေးကုသမှုတွေဟာ အသုံးဝင်ပါတယ်။
တခြားခွဲစိတ်မှုတွေကတော့ အစာလမ်းကြောင်း တိုစေခြင်း၊ အစာအိမ်ဖြတ်ခြင်း၊ အစာအိမ်ကျော်ဆက်ခြင်း စတဲ့နည်းတွေ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
အစာအိမ်ပူဖောင်း ထည့်နိုင်ပါတယ်။ အစာအိမ်ပူဖောင်းဟာ ကိုးလထိ ခံပါတယ်။
မှန်ပြောင်းမှတဆင့် အစာအိမ်ကွင်းစည်းခြင်းပြုလုပ်တဲ့အခါ ဖြစ်နိုင်ခြေအန္တရာယ်တွေက ဘာတွေလဲ
ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ အရာတွေကတော့ မေ့ဆေးမတည့်ခြင်း၊ သွေးထွက်များခြင်း၊ သွေးခဲခြင်း စတာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီနည်းလမ်းအတွက် သီးသန့်ဖြစ်တတ်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ပြသနာတွေကတော့
အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်း၊ ဆီးအိမ်၊ သွေးကြော စတာတွေကို ပျက်စီးနိုင်ခြင်း။
အစာမျိုပြွန် ဆွဲဆန့်ခြင်း၊ အစာမျိုပြွန် ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ခြင်း
အစာမျိုပြွန်၊ အစာအိမ်တွင် အပေါက်ဖြစ်ခြင်း
ခွဲစိတ်မှုမခ့ယူခင်မှာ ဖြစ်နိုင်ခြေအန္တရာယ်တွေနဲ့ နောက်ဆက်တွဲပြသနာတွေကို သိထားသင့်ပါတယ်။ သိလိုတာတွေရှိရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်။
မှန်ပြောင်းမှတဆင့် အစာအိမ်ကွင်းစည်းခြင်းကို မပြုလုပ်မီ ဘာတွေပြင်ထားရမလဲ
သင့်အနေနဲ့ မကြာသေးမီက ဘာဆေးတွေ သောက်နေသလဲ၊ ဓါတ်မတည့်ခြင်း ဘာရှိလဲ၊ လက်ရှိ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ စတဲ့ကိစ္စတွေကို ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးရပါမယ်။ မခွဲစိတ်ခင်မှာ မေ့ဆေးဆရာဝန်နဲ့ တွေ့ဆုံပြီး တိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်။ မခွဲစိတ်ခင် ဘယ်ချိန်မှာ စားသောက်ခြင်းကို ရပ်တန့်ရမယ်ဆိုတဲ့ ညွှန်ကြားချက်တွေကို လိုက်နာဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ညွှန်ကြားချက်တေါကို ရှင်းလင်းစွာ သိရှိသင့်ပါတယ်။
များသောအားဖြင့် မခွဲစိတ်ခင် ၆နာရီအလိုလောက်ကစပြီး အစာမစားရပါဘူး။ နာရီပိုင်း အနည်းငယ်အလိုအထိ အရည်တမျိုးမျိုး သောက်နိုင်ပါတယ်။
မှန်ပြောင်းမှတဆင့် အစာအိမ်ကွင်းစည်းခြင်း ပြုလုပ်နေစဉ် ဘာဖြစ်နိုင်လဲ
ခွဲစိတ်မှုဟာ တနာရီကနေ ၂နာရီထိ ကြာနိုင်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ဟာ ဝမ်းဗိုက်မှာ ခွဲစိတ်ရာခပ်သေးသေး ခွဲပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင် ခပ်သေးသေး မှန်ဘီလူးတခုကို ခွဲထားတဲ့နေရာကနေ ဝမ်းဗိုက်အတွင်းကို ထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်။
ဝမ်းဗိုက်အတွင်း ကောင်းကောင်းမြင်နိုင်ပြီး ခွဲစိတ်မှု လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
အစာအိမ်ရဲ့ နောက်မှာ လမ်းကြောင်းတခု ဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။ အစာအိမ်အပေါ်ပိုင်းကို ကွင်းထည့်ပြီး အိတ်အသေးလေး ဖြစ်စေပါလိမ်ပမယ်။ အစာအိမ်အောက်ပိုင်းကို ခေါက်ပြီး အပေါ်ပိင်းနဲ့ တွဲချုပ်ပါလိမ့်မယ်။
နောက်တနေ့မှာ အိမ်ပြန်နိုင်ပါတယ်။ ခွဲတဲ့နေ့မှာလည်း ပြန်နိုင်ပါတယ်။
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်လောက် အရည်ပဲ သောက်ရပါမယ်။ ပြီးမှသာ အစာပျော့ပျော့ စားရပါမယ်။ ၄ပတ်ကနေ ၆ပတ်လောက်ကြာပြီးချိန်မှာ ပုံမှန်အစာစားနိုင်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်ခဲ့ရတဲ့ အခြေအနေပေါ်၊ အလုပ်သဘောသဘာဝပေါ် မူတည်ပြီး တပတ် ၂ပတ်ကြာပြီးချိန်မှာ အလုပ်ပြန်ဆင်းနိုင်ပါတယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့် ဒီနည်းနဲ့ကုသထားသူတွေဟာ ကိုယ်ခန္ဓါအလေးချိန် တဝက်ကျော်ကျော် ကျသွားတတ်ပါတယ်။
Laparoscopic Adjustable Gastric Banding. http://www.hopkinsmedicine.org/healthlibrary/test_procedures/gastroenterology/laparoscopic_adjustable_gastric_banding_135,63/. Accessed July 16, 2016.
What Is Gastric Banding Surgery for Weight Loss? http://www.webmd.com/diet/obesity/gastric-banding-surgery-for-weight-loss. Accessed July 16, 2016.
Laparoscopic Gastric Banding. http://emedicine.medscape.com/article/143973-overview. Accessed July 16, 2016.